Anonymizer - inona ary ary ahoana ny fahasamihafana amin'ny VPN?
Psychology and Relationships Tena fampandrosoana
Anonymizer - inona ary izany ary fomba fampiasana izany?
Ny fahafahana tsy hajaina, miafina amin'ny adiresy IP hafa, dia manintona mpisera maro ao amin'ny tambajotra. Tamin'ny voalohany, nampiasaina ireo programa ireo mba hitazonana ny tsiambaratelo ny fampahalalana, ary taty aoriana dia nahazo asa hafa. Ny mpandinika an-tsofina - inona no atao ary ahoana no fampiasana izany, dia holazaina amin'ity lahatsoratra ity.
Anonymizer - inona ity?
Ny serivisy Anonymous dia manafina fampahalalana momba ny solosaina na mpampiasa ao amin'ny tambajotra ao an-toerana avy amin'ny serivisy iray . Tena tsara izany raha voasakana ny mpiara-miasa amin'ny orinasa izay iasany amin'ny sehatry ny fitantanana. Na, ilay mpampiasa dia tsy te-hanjary "novaina" ary mamafa ireo sora-baventy izay manakana ny fampitana ny momba ny tenany amin'ny manampahefana mahefa. Na izany aza, araka ny fampiharana, miaraka amin'ny fanampian'ny mpamatsy eo an-toerana, ny tena toerana misy ilay "miafina" dia mora mamaritra raha mampiasa adiresy MAC ianao.
Anonymizer - ny fitsipiky ny asa
Mazava tsara ny dikan'ny fandaharan-draharaha tahaka ny hoe anonymizer, ny maha-izy azy dia mora takarina raha takatrao ny maha-zava-dehibe ny asa. Amin'ny ankapobeny, izy ireo dia milalao ny anjara asan'ny mpanelanelana eo amin'ny solosaina sy ny loharano izay tiany hotsidihana. Ny fidirana amin'ny alalan'ny anonymizer dia toy izao manaraka izao:
Ny mpampiasa dia mahita tranonkala iray izay manome ny tolotra an-tserasera.
Ny marika eo amin'ny adiresy dia mametraka ny adiresin'ny pejy ao amin'ny Internet, izay mahaliana azy.
Amin'ity fotoana ity, ny pejy dia nakarina sy notontosan'ny mpisera iray.
Ny mpampiasa dia manosika ny bokotra GO ary mamaky ny pejy tsy avy amin'ny IP, fa avy amin'ny server proxy.
Inona ny fahasamihafana misy eo amin'ny anonymizer sy VPN?
Indrisy anefa, ny fampiasana ny anaran-tsokosoko dia feno olana isan-karazany - mihena ny haavon'ny fidirana pejy, ary mety tsy hitovy ny tranonkala, ary ny sasany amin'ireo asany dia tsy ho tanteraka mihitsy. Ankoatra izany, rehefa mametraka fandaharana ianao, dia afaka manangona ny viriosy, ary mety hijanona ny mety hahavaky ny tenimiafina sy ny fampahalalana manokana hafa. Eto ny fahadisoana toy izany dia misy mpandika teny an-tserasera, tsy misy VPN azy ireo. Ity fampiharana ity:
Mampihetsi-po ny fifamoivoizana sy ny fifamoivoizana.
Mampiseho toerana marina sy haingana be.
Tsara ny mampiasa sy afaka miasa tsy amin'ny ordinatera ihany, fa koa fitaovana finday.
Azo antoka fa maimaim-poana ny torrents .
Afaka miditra amin'ny votoatin'ny firenena samihafa.
Voavidy, tsy toy ny mpanafika mahazatra.
Ahoana no ahafahako manolo ny mpandika teny?
Ireo fitaovana ampiasain'ny tsy fantatra anarana dia asehon'ny servisy proxy sy tranonkala. Ireo farany dia nahazo ny be mpitia indrindra, satria tsy mila rindrambaiko sy vondrona fanampiny izy ireo. Ankoatra ny fampiharana VPN voalaza etsy ambony, izany hoe, tambajotra virtoaly virtoaly, misy ihany koa ny navigateur Tor manokana, miaraka amin'ny tsy fisian'ny mampiasa an'olon-tsy fantatra. Izy koa dia mpanonona anarana misokatra ary manompo toy ny tranonkala.
Iza amin'ireo mpanafatra anarana misafidy?
Misy karazana servetera sy programa manokana izay ampiasaina amin'ny loharanom-pejy manokana.
Ohatra, amin'ny tranokala Yandex dia friGate, ary ho an'ny tambajotra sosialy toy ny "Classmates" sy "VKontakte" dia ny Spools.com.
Raha jerena ny zava-nitranga vao haingana tany Okraina, lasa mpiserasera mavitrika amin'ny serivisy an-tserasera Anonim.in.ua ny mpampiasa. Ity no mpilatsaka an-tsoratra tsara indrindra hatramin'izao, manome fahafahana hitsidika ny tranokalam-baovao sy tambajotra malaza, eny fa na dia tsy misy ny fampidirana ny adiresiny aza.
Ny serivisy malaza amin'ny aterineto dia ny "Chameleon". Ny mpanjifany dia miparitaka manerana ny tontolo Sovietika, ary miaraka amin'ny fanampiany mitondra fiara mirediredy amin'ny Internet. Tsy misy famerana ny fidirana ity tranonkala ity, ary azo ampiasaina izany raha mbola tianao. Ao amin'ny adiresy dia mampiseho litera maromaro, marika sy tarehimarika tsy misy dikany izy, ary aorian'ny fampidirana ny angon-drakitra dia mandefa ny toerana misy azy izy.
Ahoana ny fametrahana anondroana anarana?
Ny servere proxy sy tranonkala dia tsy mitaky fametrahana. It is recommended to test the anonymizer before using it by attaching your real IP address into the bar search. Raha manova azy io ny rafitra, ary tsy mifanohitra amin'ny tena izy, dia izy io dia mpandika teny azo antoka ary azo ampiasaina amin'ny tanjona tiany hatao. Azonao atao ny mametraka ny mpitifitra Tor Browser toy izao manaraka izao:
Afeno ny programa.
Ampahafantaro ny lahatahiry ahitanao ny tranonkala. Azo atao ihany koa ny manomboka amin'ny fitaovana fitehirizana solosaina - fitarihana flash sy external drive.
Ny fanokafana ny tranokala dia miaraka amin'ny fisehoan'ny varavarankely iray ho fampifandraisana amin'ny tambajotra azo antoka.
Ny mpampiasa dia tsy mitonona anarana, ary ny angon-drakitra dia raketina.
Ahoana no hanafoanana ny anarana tsy fantatra anarana?
Indraindray ny programa ampiasaina dia viriosy, trojan, dokam-barotra na fitaovana fitsikilovana, izay azo ary tokony hesorina. Amin'ny voalohany, amin'ny fampiasana ny Wyndos fananganana, mila mahita ny anton'ireo olana ianao ary, amin'ny fampiasana ny fanavaozam-baovao ao amin'ny tranonkala mpamokatra, famoahana Anonymizer Software. Raha hitanao fa ny programa anonymizer dia tsy rakitra ho an'ny Windows, dia azonao atao ny manala azy amin'ny alàlan'ny baiko. Amin'ny hoavy, dia asaina manara-maso ny fiarovana ny solosainao manokana ianao mba hahazoana antoka fa tsy misy fandrahonana.
Ny fihetsika tsy azo ihodivirana
Ahoana no hianaranao hahatakatra ny olona?
Fampandrosoana ny sitrapo
Ahoana no hisorohana ny ho saro-tahotra sy hatoky?
Famakiana semantika - fomba sy teknika
A personality versatile
Ny hevitry ny antony manosika
Ahoana no hampivoarana ny saina?
Ny famantaranandro biolojika
Arbidol nandritra ny fitondrana vohoka
Victoria Beckham dia nanambara talenta ny ankizy madinika
Bed amin'ny tànana manokana ao an-trano
Toby vita tanana miaraka amin'ny tanana manokana
Toerana fandroana ho an'ny kilemaina
Ny fiovan'ny lehilahy - ahoana no tokony hitondrany?
10 mahavariana momba ny pizza izay sarotra inoana
Ny fandosiran'ny uterina - fanampiana voalohany
Camilla Parker-Bowles nanolotra fanadihadiana lalina tamin'ny andro alohan'ny fankalazana ny jobily
Sakafo krôata mandritra ny 3 andro
Catantar ho an'ny saka
Mankanesa amin'ny daty voalohany
Ahoana no hanaovana sandwich?